बी.पी. र पुष्पलालको असली व्यक्तित्व र सुगा रटान - हिमाल दैनिक
(बी.पी. र पुष्पलालको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा तयार पारिएको आलेखः भाग १)
११ श्रावण २०७६, शनिबार ११:५६
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठबीच उमेरका हिसाबले करिब १० वर्ष फरक थियो। त्यो महत्वपूर्ण कुरा भएन। उमेरको फरक भए पनि उहाँहरु दुबै एउटै युगका सन्तान हुनुहुन्थ्यो।
प्रथम विश्वयुद्वले सिंगो संसारलाई भस्मिभूत र्गयो। त्यतिबेलाको दुनियाँका सर्वा्धिक शक्तिशाली चार वटा साम्राज्य शासकसहित समाप्त भए। विभिन्न राष्ट्रहरुका उदय भयो।
यी सारा घटनाहरुकाबीचमा लेनिनको नेतृत्वमा भएको सोभियत क्रान्तिले विश्व हल्लायो।
एक अमेरिकन पत्रकार जोन रिडले ‘ती १० दिन जसले विश्व हल्लायो’ भनि पुस्तक लेखेका थिए। त्यो पुस्तकको शीर्षक निराधार थिएन।
बी.पी. कोइराला र पुष्पलाल दुबै सोभियत क्रान्तिबाट गहिरो रूपमा प्रभावित थिए। सोभियत क्रान्तिको लथ्य थियोः समाजवाद। समाजवादमा पुग्ने बाटोमा बी.पी. र पुष्पलालमा मौलिक मतभेद थियो। होइन भने समाजवादको लक्ष्यलाई लिएर दुबैमा अन्तर थिएन।
बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा २००३ सालमा कोलकत्तामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भयो।
पुष्पलाल प्रारम्भमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो। पछि बी.पी. र डाक्टर डिल्लीरमण रेग्मीबीच तिब्र कचिंगल भयो। त्यस मतभेदमा पुष्पलालले डाक्टर रेग्मीलाई समर्थन गर्नुभयो। तर, रेग्मीसँग पुष्पलालको सहकार्य लामो समयसम्म चलेन।
सुस्तरी उहाँ मार्क्सवादतिर आकर्षित हुनु भयो। १५ सेप्टेम्बर १९४९ तदअनुसार २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा कोलकत्तामा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो।
कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको परिघटना भने अन्य विषयजस्तै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विवादको प्रश्न छ।
यसै मितिमा कम्युनिष्ट पार्टी फलानो, फलानो गठन भयो भन्ने छैन तर, कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसका रुपमा १५ सेप्टेम्बरलाई करिब करिब मान्यता मिलेको छ।
राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलनमा भारतका समाजवादी नेताहरुले उत्साहपूर्वक भाग लिएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना ताका त्यसको उद्देश्यको स्पष्टीकरणमा डा. राममनोहर लोहियाको हात थियो।
जयप्रकाश नारायण बी.पी. कोइरालाका मित्र एवं प्रेरणाको स्रोत हुन्। जयप्रकाश र लोहियाले नेपालमा त्यसै चासो लिएका थिएनन्। दुबै नै हनुमाननगर सप्तरीमा तत्कालिन समयमा गिरफ्तार भएका थिए। उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसका रामेश्वरप्रसाद सिंह र भारतका सुरजनारायण सिंहको नेतृत्वमा रिहा गरिएको थियो। हानथापको त्यस घडीमा एउटा नेपाली युवकको देहान्त भएको थियो। जयप्रकाश र लोहियाले यो कुरालाई आजीवन विर्सिएनन्। फलस्वरुप उनीहरु नेपालकाप्रति सधैँ भावुक रहे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पनि भारतीय कम्युनिष्टसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थियो। प्रवासका क्रममा पुष्पलालले दार्जि्लिङका कम्युनिष्ट नेता रत्नलाल ब्राहमणसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो।
रत्नलाल ब्राम्हमण दार्जि्लिङका एक स्थापित कम्युनिष्ट नेता थिए।
रत्नलालको व्यक्तित्वलाई नै लिएर रुपनारायण सिंहले ‘आमा’ भन्ने कथा लेखेको भन्ने कथन छ। रुपनारायणको त्यस कथामा रत्नलालालको नाम समेत पनि मिल्दोजुल्दो गरी नायकको नाम राखेका छन् ‘मणिलाल’। जेहोस्, यो एउटा विषयान्तरको कुरा भयो।
पुष्पलालको कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका दौरानमा र पछि पनि अयोध्याप्रसाद सिंह भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि थिए। शोधकर्ताहरुका अनुसार, उनलाई विधिवत रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्य भनेर लामो समयसम्म भन्ने गरिन्थ्यो।
२००७ सालको क्रान्तिमा एक भारतीय समाजवादी कुलदीप झा शहिद भएका थिए। कुलदीप झा बाहेक पनि भोला चटर्जी सात सालको क्रान्तिमा अग्रपंक्तिमा थिए।
सात सालको क्रान्तिमा बर्माबाट नेपालमा हतियार उपलब्ध गराउने कार्यमा भोला चटर्जी आफैं संलग्न थिए। पछि भोला चटर्जी विराटनगर मोर्चामा समेत भाग लिन पुगेका थिए।
अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको गाथा अर्कै मोडमा आएको छ। सीमासँगको हामीहरुको सहकार्य र विभाजन ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा छ।
होइन भने, युवा बी.पी. कोइराला र पुष्पलालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समाजवादको मान्यता अनुरुप भारतीय नेता अयोध्याप्रसाद सिंह, ब्राहमण र लोहियालाई ऐतिहासिक नेताका रुपमा सहकार्य गर्न अप्ठ्यारो मानेका थिएनन्। आज बी.पी. र पुष्पलाललाई सम्झिँदाखेरि त्यो स्मृति एक सुखद पक्ष हो।
बी.पी. कोइराला आफ्नो प्रारम्भिक राजनीतिक कालदेखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेताका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ।
यस अर्थमा उहाँलाई भाग्यमानी मान्नु पर्छ। उहाँको नेतृत्व कालमा कांग्रेसभित्र कुनै विवाद भएन भन्ने होइन। थोर बहुत विवाद भयो तर, त्यसमा विवाद गर्ने पक्ष जहिले पनि पराजित भयो। उनीहरु चोइटिएर गए। एकठाउँमा पनि रहेनन्।
ठिक त्यसको विपरित पुष्पलालका लागि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आफूलाई उपस्थित गराउन अत्यन्त नै अप्ठ्यारो भयो। आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरुले नै पुष्पलाललाई ‘गद्दार’ भन्ने सिलसिला लामो समयसम्म चल्यो। ‘गद्दार पुष्पलाल’ भन्ने बहुचर्चित पुस्तक २७ सालमा आजका कम्युनिष्ट आन्दोलनका वरिष्ठ र जेष्ठतम् सदस्य रहनुभएका कमरेड मोहनविक्रम सिंहले लेख्नुभएको थियो।
राजनीतिक हिसाबले ‘गद्दार पुष्पलाल’ भन्नु एउटा विष्फोटक र गम्भीर अभिव्यक्ति थियो। होइन भने, मोहनविक्रमको आरोपभन्दा अगाडि नै पुष्पलालाई एकातिर तुलसीलाल पक्ष अर्र्कोितर रायमाझी पक्ष र अर्को्तिर मनमोहन पक्षले पुष्पलालको उग्र विरोध गरिसकेको थियो।
मोहनविक्रमको अभिव्यक्ति भन्दा पहिले नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन चार शिविरमा बाँडिएको थियो।
पुष्पलाल, तुलसीलाल, केशरजंग रायमाझी, कम्युनिष्ट आन्दोलनको आदिपुरुष त म पो हुँ त भनेर दुई चारजना साथी लिएर अलग्गिएका थिए। मनमोहन अधिकारीले पार्टीको रुपमा आफूलाई अगाडि सार्नु भएको थिएन। उहाँले आफ्ना भाई भरतमोहन लगायतका साथीहरुलाई लिएर बेग्लै समूह चलाउनु भएको थियो।
काठमाडौंका साथीहरु शम्भुरामजीको नेतृत्वमा अथवा कृष्णदासको नेतृत्वमा आफ्नै हिसाबले साना साना समूह बनाएर बसेका थिए।
पुष्पलालको आफ्नो समूहको बाहेक बाँकी सबै समूहसँग उहाँ मतभेद राख्नु हुन्थ्यो र पुष्पलालको आफ्नै समूह पनि स्थिर र सुदृढ थिएन।
उदाहरणका लागि सम्झिँदा, नेकपा मालेमा मिस्सिएका मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित प्रारम्भमा पुष्पलालसँगै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय लुम्बिनी अञ्चलको ठूलो नेता मानिएका केशरमणी पोखरेल पनि पुष्पलालसँगै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। मोदनाथ प्रश्रित पुष्पलालको सांस्कृतिक विभागको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यी सबै पुष्पलालसँगै थिए। हेर्दाहेर्दै यी सबैले एकपछि अर्को गर्दै छाड्दै गए।
यस्तो विचलन बी.पी. कोइरालाका समर्थकहरुमा आएन भनेर एकहदसम्म भन्न सकिन्छ। तर, यसको अर्थ बी.पी. कोइराला पनि पुष्पलालभन्दा कम एकांकी हुनुहुन्नथ्यो। बी.पी.ले सुवर्णशम्शेरबाहेक अरुसँग ठूलो झगडा गर्नुभएन। तर, बी.पी.को राजनीतिलाई गलत हो, भारतमा बसेर कुनै पनि हालतमा सशस्त्र क्रान्ति गर्न सकिँदैन भन्ने विषयमा बी.पी.लाई सम्मान गर्ने र बी.पी.सँग सहमति नजनाउने ठूलो जमात थियो।
बनारसमा बसेर क्रान्तिको आब्हान गर्ने विषयमा त्यसो गर्नु मुर्खता हो भन्नेमा सुवर्णशम्शेर, सूर्यप्रासद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि एकमत थिए।
दुई नेताले यसप्रकारले कार्यकर्ता र सहयोगीहरुको लामो विरोध खप्नु परेको थियो। तर, नेपाली कांग्रेसमा गालीगलौच भएन। पुष्पलाललाई गद्दार भनेजस्तो बी.पी.लाई गद्दार भन्ने परिपाटी कांग्रेसमा बसेन।
बी.पी.को सर्वा्धिक कडा आलोचना गर्नु पर्ने रामराजलाई थियो तर, उनले पनि कडा भाषा प्रयोग गरेको देखिएन। बी.पी.का बारेमा कडा भाषा प्रयोग गर्ने मान्छे सर्वा्धिक दुर्गा सुवेदीको लेखमा पनि त्यो देखिँदैन।
बी.पी. र पुष्पलालमा यहाँ एउटा समानता छ। दुबै राजनीतिक पार्टीमा मिलिजुली होइन, एक्लै हिँड्न चाहन्थे। भनिन्छ, एक्लै हिँड्ने मान्छेको आफ्नै विशेषता हुन्छ। उ सके धेरै छिटो छिटो हिँड्न चाहन्छ। तर, छिटो हिँडाइले राजनीतिमा सफलता दिँदैन। हुलमा हिँड्ने मान्छे कम तनावमा हुन्छ। ढिलो र एक्लै हिँड्ने मान्छे हिँड्न त हिँड्छ तर, कतिपय समयमा गन्तव्यमा नपुग्न पनि सक्छ।
बी.पी.को राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध असफलतामा वित्यो। त्यो असफलताको कारण के थियो भने, उहाँले कहिल्यै पनि असफलताको त्यस चरणमा आफ्ना समवयश्क, सहधर्मी साथीहरुसँग एकता गर्ने प्रयास गर्नु भएन। पुष्पलालको पनि यस्तै थियो। पुष्पलालमा बी.पी.को कोटीको अहंम्मन्यता थिएन भन्न सकिन्न। यी भए नेतेृत्वका कुरा।
सिद्धान्तका हकमा बी.पी.लाई आजको नेपालको हकमा मुख्यतयः राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तले जानिन्छ। पुष्पलाललाई संयुक्त जनआन्दोलनका विचारक वा प्रणेताका रुपमा प्रचारित गरिएको छ।
बी.पी.ले समाजवादकाबारेमा उल्लेख्य रुपमा त्यति लेख्नु भएको छैन। लेख्न सजिलो पनि थिएन। यस्तो लेखनमा आज पनि सजिलो छैन।
पुष्पलालले नेपाली इतिहासकाबारेमा अनेकानेक लेखहरु लेख्नु भएको छ। पुष्पलालसँग औपचारिक शिक्षा थिएन। म्याट्रिक जति पढ्नु भएको थियो। म्याट्रिक जति पढ्दा पनि उहाँमा जान्ने र सिक्ने इच्छा कति ज्यादा थियो भन्ने कुरा उहाँको टिपोटबाट थाहा हुन्छ।
पुष्पलालको नामबाट उहाँका सहयोगी र अनुयायीहरुले करिब ८र१० वटा पुस्तकहरु छापेका छन्। त्यी पुस्तकहरुमध्ये एउटा ‘पुष्पलालस् नोट्स’ भन्ने पुस्तक छ। त्यसमा उहाँले पुस्तकहरु पढ्दै टिप्पणी लेख्दै गरी राख्नु भएको एउटा रोचक सम्झना छ। त्यो बाहेक पनि उहाँले प्रत्यक्ष शासनताका प्रवासमा रहँदा वनारसबाट नेपाल पत्र भन्ने लेख प्रकाशित गर्नु भएको छ। नेपाल बन्द भन्ने प्रकाशनमा नेपालको इतिहासलाई जनवादी दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने पहिलो गम्भिर प्रयास उहाँले गर्नुभएको छ।
बी.पी. कोइरालाले त्यति गम्भिरतापूर्वक लेख्नु भएन। यद्यपि उहाँमा ज्यादा प्रतिभा र त्यो भन्दा ज्यादा साधन स्रोतको सम्पन्नता थिया होला तर, के कारणले हो पुष्पलालले जस्तो मेहनत गरेर लेख्नु भएन। बी.पी.सँग मेरो निकट सम्बन्ध थियो, पुष्पलालजीसँग निरन्तर भेट हुन्थ्यो। उहाँसँग मेरो ज्यादा भेट राजघाटस्थित गान्धी विद्यासंस्था नामको पुस्तकालयमा भेट हुन्थ्यो। त्यो संस्था अहिले लगभग बन्द भइसकेको छ। त्यस संस्थाका संस्थापक जयप्रकाश नारायण हुनुहुन्थ्यो।
आज यी दुई जनाको पुण्यस्मरण गर्दा पुष्पलालजीका लेख रचनाहरु र उहाँले मरिमेटेका पाटाहरुको सम्झना गर्दा सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने,
बी.पी.ले लेख्नु भएको ‘राजतन्त्र’ भन्ने लेख र पुष्पलालले लेख्नु भएको ‘नेपालको जनवादी इतिहास’ अथवा बी.पी.ले भन्नु भएको राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीति अथवा पुष्पलालले भन्नु भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नारामा के छ?
म यसमा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, समय बदलिइसकेको छ। पुष्पलाल र बी.पी. कोइराला एउटा युगका सन्तान थिए। त्यो युग १९८९ मा समाप्त भयो। एकजना प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक हाब्सहाम जसको सिंगो संसारमा नाम चलेको छ, उनले आजको विश्व इतिहास लेखेका छन्ः कुनै शताब्दी अचम्मको हुन्छ। त्यो शताब्दीको सम्पूर्ण सार सन्देश पहिलेका शताब्दी जस्तै १७औँ शताब्दी १७ मा सिद्धिदैन, १८ मा आएर लम्बिएर पसारिन्छ र १८ र १९ मा जान्छ। २०औं शताब्दीको सारतत्व भनेको १९१४ देखि १९८९ सम्ममा खतम भयो।
पुरानो व्यवस्थाको अवसान १९१४ मा भयो। त्यतिबेला एकसाथ जर्मन, रसियन साम्राज्य, टर्की साम्राज्य, अष्ट्रियन साम्राज्य गरी चार वटा साम्राज्य समाप्त भए। आज एशिया र युरोपमा देखिएका थुप्रा देशहरु यिनै चार साम्राज्यभित्र अटाएका थिए। अहिलेको इजिप्ट, लेबनान, सुडान, इथियोपिया लगायत जतिपनि मिडलइष्टका देशहरु छन् सबै टर्कीको अधिनमा एउटै राज्यअन्तर्गत थिए। सुप्रिम सम्राट थिए।
जतिपनि मुलुकहरु अहिले युरोपमा छन् हंगेरी, पोल्याण्ड, चेक, स्लोभाकिया लगायत झण्डै १० वटा देशहरु त्यतिबेला अष्ट्रियाको अन्तर्गत थिए। अष्ट्रोहंग्रो एम्पायर भनिन्थ्यो। बोस्निया, सर्विया, हर्जगोभिनिया लगायतका मुलुक पनि एउटै देशमा थिए।
१९८९ को महत्व के हो भने, सोभियत शासन पनि सिद्धियो, सोभियत साम्राज्य पनि सिद्धियो र काजकिस्तान, तुर्किस्थान, ताजिकिस्तान, जर्जिया लगायत विभिन्न देश बने। यो त साम्राज्यको हिसाबले भयो। सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वमा अब एक्लो महाशक्ति रहयो– अमेरिका।
व्यक्तिका हिसाबले पनि १९१४ मा जन्मिनु भएका बी.पी. कोइराला १९८३ मा वित्नु भयो अनि १९२४ मा जन्मिनुभएका पुष्पलाल १९७८ मा बित्नु भयो।
त्यसैले उहाँहरुले त्यतिबेलाको समयमा नेतृत्व गर्नु भएको विचार, धारणा, प्रस्तुती, शब्द र अक्षरका रुपमा राखेका कुराहरु आज पनि महत्वपूर्ण छन् भन्नु गलत हुनेछ।
बी.पी.का आखिरी वर्षहरुमा आफ्नो सम्पूर्ण चिन्तन राजतन्त्रको अस्थित्वको वरिपरी अलमलिनु भएको थियो। कहासम्म थियो भने, राजा नभए देश रहँदैन भन्ने थियो र मेरो र राजाको घाँटी जोडिएको छ भन्नु भयो। पुष्पलालको सम्पूर्ण सार संयुक्त जनआन्दोलनमा थियो।
आज नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको छ। अब यिनीहरुले संयुक्त जनआन्दोलन हुन्छ त? कांग्रेस र कम्युनिष्टले कुन कुरामा संयुक्त आन्दोलन गर्ने त? गर्दा के का पछाडि वा के का निमित्त गर्ने? चल्न त संयुक्त आन्दोलन चलेको छ तर, यो संयुक्त आन्दोलनको सार के छ भने हामीमध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने। त्यसैलाई हामीले संयुक्त प्रयास भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो होइन भने कांग्रेस र कम्युनिष्ट अहिले संयुक्त रुपमा काम गर्न तयार छैनन्।
यिनीहरुको अब के बाँकी छ त? अब हामीले यति कुरालाई विर्सिएर २०औं शताब्दिमा उनीहरुको प्रशिक्षण, उनीहरुले लेखेका पुस्तक, शिक्षा, अगाडि सारेका राजनीतिक प्रस्तावलाई बिर्सिएर त्यसपछि पनि उनीहरुमा के बाँकी छ भनि खोज्न थाल्यौँ भने तबमात्रै असली बी.पी. कोइराला र असली पुष्पलालको व्यक्तित्व उद्घाटन गर्न सक्छौँ।
त्यो छ कि छैन? छ। त्यसपछि पनि त्यो सार बाँकी छ। जुन उनीहरुको साथ गयो, जुन उनीहरुले लेखे, छापे, बोले त्यसैलाई आज पनि दोहोर्याउनुको कुनै मतलब छैन। तर, दुर्भाग्य के छ भने, बी.पी. कोइरालाका अनुयायीका नाउँमा, पुष्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई मनमोहनका नाउँमा उनीहरुले बोलेका र लेखेका उद्दरण दोहोर्याएर समकालिन परिस्थितिको व्याख्या र विवेचना गरिँदैछ। यो निरर्थक छ।
Prevपछिल्लोब्रम्हाजीको उँट जस्तै कांग्रेसको विधान: लागू हुन नपाउँदै नेतृत्व र संगठन नै सकसमा
अघिल्लोनेपालले कुवेतलाई हरायोNext